Salda Ski Resort Yakagadzirira Mwaka
Salda Lake muBurdur rakatarisa kumawere zviuru mazana maviri zveSalda Ski Center yakazarura mwaka. Muzhizha gungwa muTurkey Salt akati apo kushanyira Maldives 900 mamiriyoni 1 zviuru vanhu, chando mwaka [More ...]
Gavhuna Akbıyık Akashanyira Merga Butane Ski Center
İdris Akbıyık, Gavhuna weHakkri, akaongorora mafambisirwo ari kuitwa uye matsva emari paMerga Butan Ski Center ane urefu hwe2.500. Gavhuna Akbiyik, Chief Public Prosecutor, Mustafa Balik, Mutevedzeri Gavhuna Mustafa Duruk, [More ...]
Kunopisa Kudzidzira KuChinoşı Ski Center
Mauto e2 zviuru zvehurefu Çambaşı Plateau 650 yakavakirwa panharaunda yekutendeuka Çambaşı Nguva Yechando Nhabvu neSki Center kurovedzwa, havana kutsvaga chokwadi. Mauto Metropolitan Municipality Tsvaga uye Kununura Matimu mukurovedza muviri [More ...]
Davraz Mountain Winter Sports Tourism Centre 5 Mechanical Plant uye Infrastructure Construction
Davraz Mountain Zvekare Sports Tourism Tourism Center Kuvaka kwe5 mechanesheni nzvimbo uye zvivakwa (subcontracting of overdom magetsi kuendesa mitsara uye zvimwe zvekushandura nzvimbo) Isparta Special Provincial Administration Investment [More ...]
Sarikamis Ski Center Chairlift Tender: 3 Iyo Sarikamis Ski Center Chairlift, iyo yakashambadzirwa munaNovember, ichapera uye kuiswa mukushandira mushure memwedzi ye2. Sarikamis Cibiltepe Ski Resort 2. Nyamavhuvhu kuchiteshi chepamusoro chechikamu 13 [More ...]
Murimi anokurumidza muTrabzona ropeway kuvaka
Trabzon Kutsvaka makambani kuti amburenzi wire motokari kuvakwa: Trabzon 2504 Çakırgöl kukwira rwenze ari the uyai akaronga kuti gore rinouya, asi mukuru nzira ndakapedza chisipo; Mumwe mutengesi uyo achavaka kambani yemotokari. [More ...]
Trabzonspor akawana kudzvinyirira kwaDavraz Camp nemukati yemoto (Photo Gallery)
Trabzonspor Davraz Camp yakamanikidzwa nekufamba neye chingoro mota: Trabzonspor Isparta Davraz kambi apo ichigadzirira mwaka mutsva nhasi, yakasimbiswa nekutora cable yemotokari kukwira. Kuenderera mberi kugadzirira kwemwaka mutsva muIsparta Davraz [More ...]
Muna 24 2012 May LEITNER muna Bursa, Turkey ave akaita mukuru buri. vaitungamirira makambani Leitner ari waya motokari zvekutepfenyura muna Bursa, Turkey anoramba basa pahofisi. LEITNER ropeways kwasvika yakatsviriridza Turkey munzvimbo huru nhatu. Ava: [More ...]
Motokari yekutsvaga mashizha ichasunungurwa kubva kuVAT
Rail system investments ichasunungurwa kubva kuVAT Rail system Investment kuti iitwe mukati mechinzvimbo che2023 tarits ichasunungurwa kubva kuVAT. Vanamatunhu vachabatsirwawo kubva mukukurudzira Hurumende inoregedza VAT pamabasa enjanji inoshanda mukati mezvikamu zve2023 [More ...]
Chii chinonzi chairlift? Iwo akaiswa mukati ski resorts anowanzova macheya, nepo anoshanda pakati pemisasa uye pekugara ari madiki makabati madiki. Mune dzimwe nyika [More ...]